ဇနီးသည်ဆိုတာ ယောက်ျားကို ငရဲလည်း ပို့နိုင်သလို နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း ပို့နိုင်တယ် – Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Knowledge ဇနီးသည်ဆိုတာ ယောက်ျားကို ငရဲလည်း ပို့နိုင်သလို နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း ပို့နိုင်တယ်
ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ဆန်းကြယ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ဖော်နဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။
အိမ်မှာလာနေတဲ့ မိန်းမဘက်ကအမျိုးနဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။ မိန်းမရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။အလုပ်ထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။
အပြင်မှာဖောက်ပြန်တက်ကြတယ်။ ဒါတွေက ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ မကြာခဏကြားနေကြရတဲ့ကိစ္စတွေပါ။
ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုထဲက လူတွင်ပါလို့ နွားကို ကျား
ကိုက်တာပါ။ စည်းဖောက်တယ် စည်းပေါက်တယ်ဆိုတာကလဲ အတွင်းလူက ဖောက်လို့ ပေါက်လို့ စည်းပျက်ကြရတာပါ။
တစ်ဖက်က မြူစွယ်လို့ ဖျားယောင်းလို့ သိမ်းသွင်းလို့ ဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ့်လူမပါရင် အထမမြောက်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။
ဒဿ ဂီရီနောက် မယ်သီတာပါသွားတာက မယ်သီတာဘက်က မဖောက်ပြန်ဘူးဆိုသိတိုင် လက္ခဏာတားခဲ့တဲ့ စည်းကို မယ်သီတာက
စဖောက်ပီး အပြင်ထွက်လို့သာ သူများနောက်ကိုပါရတာပါ။ လောကမှာ ကိုယ်လူကိုယ်နိုင်အောင်မထိန်းနိုင်တောင် ကိုယ့်လူမဖောက်ပြန်သ၍
ကိုယ့်ဘက်ကလူ စည်းမဖောက်သရွေ့ ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာ အထမမြောက်ပါဘူး။ကိုယ့်လူကိုယ်ထိန်းမနိုင်တော့ဘူး တားမရတော့ဘူးဆိုတဲ့
နေအထား ရောက်လာပါပီတဲ့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲလို့ စဉ်းစားကြတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အမြော်အမြင် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်း သည်းခံနိုင်စွမ်း
ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းတွေက ဒီနေရာမှာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။တလင်တမယားဥပဒေနဲ့
ယောက်ျားကို ထောင်ထဲထည့်မလား? သည်းခံပီးဆက်ပေါင်းမလား? ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ့်ဘာသာရပ်တည်မလား? အစရှိတဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေရှိတဲ့အထဲက
ဒီကနေ့ မင်းရာဇာမိန်းမ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လမ်းက အဆိုးဆုံးနဲ့ပတ်ဝန်း ကျင် ကို ဒုက္ခအပေးဆုံး လမ်းကြောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ အိမ်ဖော်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့
ယောက်ျားကို တစ်လင်တမယားဥပဒေနဲ့ တိုင်ခဲ့ရင် သူ့ယောက်ျား အဖမ်းခံရမယ် ထောင်ကျမယ်။ ဒါဆို သူကတော့ ဖောက်ပြန်တဲ့ ာက်ျား ကို ထောင်ထဲထည့်တဲ့
မိန်းမဖြစ်သွားမယ် သူ့သမီးလေးက ဖောက်ပြန်လို့ ထောင်ကျတဲ့ ဖအေရှိတယ်ဆိုတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရပ်တည်ဖို့ စိတ်ဒဏ်ရာရသွားမယ်။
ဒီလောက်နဲ့ ပီးသွားပီ နစ်နာသူက မင်းရာဇာနဲ့ သူ့ သမီး လေး ၂ ယောက်ပဲရှိပါမယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို သည်းခံမယ် အိမ်ဖော်ကလေးမလေးကို
သူ့မိဘအိမ်ပို့ပီး လူခွဲထားလိုက်မယ် အားရှိခေါင်းသွားမလျှော်တော့ပဲ ….ကိုယ့်ယောက်ျားကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်ထိန်းလိုက်မယ် ဆိုရင် အိမ်ဖော်ကလေးမလေး
ပန်းကောင်းအညွန့်ကျိုးနစ်နာတာက လွှဲပီး သူလဲနောင်တချိန် အိမ်ထောင်တစ်ခု ထူထောင်နိုင်မယ် အားလုံးလဲ တိတ်တဆိတ်ပီးသွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်တနည်းအနေနဲ့ မင်းရာဇာမိန်းမက ဒီလို ဖောက်ပြန်တဲ့ ယောက်ျားကို မသတီတော့လို့ ငါ့ခြေထောက်ပေါ် ငါရပ်တည်မယ် မပေါင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့
ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်လဲ နောင်တချိန်သူ့သမီးလေးမှာ အဖေဖောက်ပြန်လို့ ငါ့မိဘတွေ လမ်းခွဲရတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဏ်ရာ ကလွှဲရင် ပုံမှန်ဘဝမှာပဲ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ဒီကနေ့ မင်းရာဇာမိန်းမ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကို ကြည့်ပီး ကျနော်တော်တော်တုန်လှုပ်သွားသလို ငါ့မိသားစုမှာလဲ ဒီလိုလူမျိုးမပါဖို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။ သူလဲလောင်မြိုက် ပတ်ဝန်း
ကျင်ကိုလဲ အကုန်လောင်မြိုက်ပီး ဒုက္ခမီးတွင်းထဲ ဆွဲချသွားတဲ့ မိန်းမပါ။သူ့လင် မင်းရာဇာကတော့ ဖောက်ပြန်မှုအတွက်ခံရတယ်ဆိုပေမဲ့ အခုလို လူသိရှင်ကြားဖြစ်တဲ့ အခါမှာ
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကနေ သက်ငယ်မဒိန်းမှု ငြင်းပန်းနှိပ်စက်မှု အစရှိတဲ့ ပြစ်မှုများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်သူ့မိုက်ပြစ်သူခံရတယ် ဆိုပေမဲ့ အနေနီးတဲ့
သာမာန်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကနေပီး ထောင်ထဲကထွက်လာရင်တောင် လောကအလည်မှာ လူဆက်လုပ် ဖို့ ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲတဲ့
ဘဝတစ်ခုကိုရောက်အောင် ယောက်ျားလုပ်သူ့ကို သူတွန်းပို့လိုက်ပါပီ။ကိုယ့်အိမ်က ပြဿ နာကိုယ့်ဘာသာမရှင်းပဲ မိဘအိမ်အထိသယ်သွားပီး အိမ်ဖော်ကလေးမခေါင်းကို တူနဲ့ထုလောက်အောင်
မိဘတွေ အရှေ့မှာ ပြဿ နာရှာခဲ့တဲ့ သူ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ဖအေခမြာ လက်ရှိအချုပ်ထဲရောက်နေပီးတော့ မကြာခင်ထောင်ကျရပါတော့မယ်။
သူမွှေးတဲ့ မီးက သူ့အဖေကို လောင်သွားပါပီ။သမီးက အက်ဆစ်နဲ့ပတ်တယ် သမက်က မဒိန်းကောင် ယောက်ျားက နှိပ်စက်မှုနဲ့ ထောင်ထဲမှာဆိုတော့
ကျန်ရစ်ခဲ့မဲ့ မင်းရာဇာမိန်းမရဲ့ အမေဘဝက ပတ်ဝန်ကျင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ဘယ်လိုမှ ခေါင်းမော့ရင်ကော့နိုင်စရာမရှိတော့သလို မင်းရာဇာမိဘတွေလဲ
ခုချိန်ဆို ရင်ထဲမှာ မီးတောက်နေကြပါပီ။ဒါက မင်းရာဇာမိန်းမမွှေးတဲ့မီးက သူ့အမေနဲ့ သူ့ယောက္ခမတွေ လောင်ကျွမ်းကုန်တာပါ။
တခါတည်းမှာပဲ ခံရတဲ့ အိမ်ဖော်ကလေးရဲ့ မိဘတွေဘက်ဆိုလဲ သောကမီးတွေ တောက်လောင်ကုန်ပါပီ။ အားလုံးသော ပတ်သတ်တဲ့လူတွေ တစ်ယောက်မှ
စိတ်မချမ်းသာရတော့ပါဘူး။သူတို့တင်ပဲလားဆိုတော့ ချုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ မင်းရာဇာရဲ့ မန်နေဂျာ ရခိုင်လေးဆိုတဲ့ သူတို့အလုပ်သမားပါ ကြံရာပါအဖြစ်နဲ့
ဒီအမှု မှာ မလွှတ်မြောက်တော့ပါဘူး။သနား ဖို့ကောင်းတဲ့ အိမ်ဖော်ကောင်မလေးခမြာမှာလဲ ပြန်ကောင်းမယ် မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာ မသေချာသေးသလို
…ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ သေသွားခဲ့ရင် သူ့ဘဝအတွက်အမှန်တရားဆိုတာကို သိသွားရှာမှာ မဟုတ်သလို ပြန်
ကျန်းမာလာရင်လဲ ဒီအမှု့ကြီးကိုရင်ဆိုင်ပီးတဲ့ သကာလ မဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့မိန်းမ …..အက်ဆစ်နဲ့အပက်ခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းမဆိုတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ လူဒဏ်ရာတွေနဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ ဘဝကို
ခက်ခဲစွာလျှောက်လှမ်းရတော့မှာပါ။ သူတို့နေတဲ့ နယ် မြို့လေးတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားအရ ဘယ်သူ့သမီးကတော့ မင်းသားမင်းရာဇာအိမ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ….
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲ သိနေတဲ့အပြင် ဒီနေ့လို တိုင်းကျော်ပြည်ကျော်ဖြစ်ကြလေတော့ ဘယ်လိုမှ ဖုံးဖိထား လို့မရလောက်တော့ပါဘူး။သူအနေနဲ့ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ
ဖအေလဲထောင်ကျ ယောက်ျားလဲထောင်ကျ သူလဲထောင်ကျရမဲ့ အပြင် ….ယောက်ျားက သက်ငယ်မဒိန်းကောင် ဖအေကထောင်ထွက် သူကိုယ်တိုင်လဲ လူမ ဆန်တဲ့နှိပ်စက်မှုနဲ့
ထောင်ထွက်အနေနဲ့ အပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတဲ့အခါ ကျန်ရှိတဲ့ဘဝကို လူတကာတံထွေးခွက်ထဲကနေ ဖြတ်သန်းရမဲ့အပြင် ထောင်ထဲမှာလဲ အနည်းဆုံးတော့ ဝင်ဝင်ချင်း
အထဲကလူတွေ ဝိုင်းထုတဲ့ဒဏ်ကို ခံရအုံးမှာ ပါ။ဒီအဖြစ်အပျက်တခုလုံးမှာ သနားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ လူမမယ်စာမမြောက်သေးတဲ့ မင်းရာဇာသမီးလေးပါ။
သူအနေနဲ့ ဒီအချိန်မှာ ဘာမှ မသိသေးပေမဲ့ သူကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာမဲ့ အနာဂတ်မှာ ဖိုးအေက သူများကို
နှိပ်စက်လို့ ထောင်ကျတဲ့ ထောင်ထွက် ဖအေက သက်ငယ်မဒိန်းကောင် မအေကလူမဆန်တဲ့ သူများသားသမီးကို အက်စစ်နဲ့ပက်တဲ့ ထောင်ထွက်မိန်းမဆိုတဲ့ ဘဝကြီးကို
သူရွေးချယ်စရာမရှိပဲ ဖြတ်သန်းရပါတော့မယ်။မင်းရာဇာ သမီးဆိုပီး သိလိုက်တာနဲ့ ဟင်ဆိုပီးနှာခေါင်းရှုံကြမဲ့ ကွယ်တာနဲ့ သူ့အဖေနဲ့ အမေကလေဆိုပီး အတင်းပြောကြမဲ့
ကျောင်းတက်လို့ ကလေးအချင်းချင်းယှဉ်ရင်တောင် တန်းတူရပ်တည်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့တဲ့ အခြေအနေရောက် အောင် သူ့အမေက တွန်းပို့ခဲ့ပါပီ။
မင်းရာဇာမိန်းမမွှေးတဲ့ မီးဟာ အဖေအမေ ယောက္ခမ ယောက်ျား သူ့သမီး သူ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ သူကိုယ်တိုင် လူ့လောက လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဆက်လက်ရပ်တည်လို့မရအောင်ကို
ဘဝပေါင်းများစွာကို ဖျက်စီးလိုက်တာပါ။ငါ့ဆီလာလုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားနဲ့ ငါဆီလာနေတဲ့ အိမ်ဖော် ငါလုပ်ရင်ခံရမယ် ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လူတစ်ဖက်သားအပေါ်
နိုင်ထပ်စီးနင်းနဲ့ မတော်မတရား အနိုင်ကျင့်ရာက အရှိန်မထိန်း နိုင်တော့ပဲ မိမိကိုယ်တိုင်ရော မိသားစုလိုက်ကိုပါ ဒုက္ခတွင်းကိုဆွဲသွင်းခဲ့တဲ့ ဒီမိန်းမလိုမျိုး လူတွေ မိမိပတ်ဝန်းကျင်
မိမိအသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ မပေါ်ပေါက်ပါစေနဲ့ မိသားစုအတွင်းမှာပြဿနာရှိရင်လဲ ခေါင်းအေးအေးထားပီး အကောင်းဆုံးအဖြေရှာနိုင်ကြပါစေ ကံဆိုးတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးလိုဘဝမျိုးတွေလဲ
Credit Aung Myo Min
“အို” သွေးပိုင်ရှင်လေးတွေကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့အချက်(၇)ချက်“အို” သွေးပိုင်ရှင်လေးတွေကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့အချက်(၇)ချက်
“အို” သွေးပိုင်ရှင်လေးတွေကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့အချက်(၇)ချက် အချစ်ရေး အဆင်ပြေဖို့ဆိုရင် ချစ်သူနှစ်ယောက်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် နားလည်ပေးဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲ မဟုတ်လား ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ချစ်သူကို နားလည်ဖို့ဆိုရင် သူ့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အမူအကျင့်လေးတွေကို သိမှဖြစ်မှာပါ။ ...
ဓာတ်ခွဲခန်းအသားတု ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိကောင်းစရာများဓာတ်ခွဲခန်းအသားတု ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိကောင်းစရာများ
ဓာတ်ခွဲခန်းအသားအငြင်းအခုန် ဓာတ်ခွဲခန်းအသားတု ထုတ်လုပ်ခြင်းဟာ ကောင်းတာ၊ ဆိုးတာတွေရောပြွန်းနေတာမို့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ နွားမွေးဘို့ ဘရာဇီးမှာလို သစ်တောတွေရှင်းလင်းစရာမလိုတဲ့အတွက် သစ်တောပြုန်းတီးမှုမဖြစ်ဘူး၊ ပုံမှန်နွားမွေးမြူရေးက ရေအသုံးများပြီးအမဲသားတစ်ကီလိုရဖို့ ရေ၂၅၀၀ ဂါလံအသုံးပြုရတာမို့ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားက ရေချွေတာရာရောက်တယ်လို့ပြောကြပါတယ် ။ နွားချေးကနေ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးစေတဲ့ဓာတ်ငွေ့ထွက်တဲ့ပြဿနာလဲမရှိဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ...
ဘယ်လိုအခြေအနေရောက်ရောက် ဖြစ်တည်မှုကို ချစ်တတ်ပါစေဘယ်လိုအခြေအနေရောက်ရောက် ဖြစ်တည်မှုကို ချစ်တတ်ပါစေ
ဘယ်လိုအခြေအနေရောက်ရောက် ဖြစ်တည်မှုကို ချစ်တတ်ပါစေ ယောကျာ်းဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းဟာ ထိုင်ခုံကို မှီထိုင်ရင် ဗိုက်ခေါက်ထွက်ပါတယ် ( gym ဘယ်လောက်ဆော့ဆော့ ထွက်တယ် ,တကယ် ) တစုံတယောက်က နင် ဒီနေ့ သိပ်လှတာပဲလို့ ပြောလာခဲ့ရင် ...